Bosingank, Bosingak - Seoul
Adiresy: 54 Jong-ro, Gwancheol-dong, Jongno-gu, Seoul, Korea Atsimo
Taonan'ny fototra: 1396
Ao amin'ny renivohitra koreana iray no iray amin'ireo làlana tranainy indrindra ao amin'ny firenena, antsoina hoe Chonno. Ny anarany dia midika hoe "boulevard of belfries". Ary tena marina tokoa izany, satria eto ilay tilikambom-pitaingan-tsosialy Bosingak. Manintona an'arivony mpizahatany isanandro io fisintonan- javatra manokana io.
Niorina tamin'ny 1396 ny fanorenana nandritra ny fitondran'ny Taejo Mpanjaka (Dynasty Joseon), raha kely i Seoul. Ny lakolosy dia tao afovoan-tanàna ary nandray anjara lehibe teo amin'ny fiainan'ireo teratany. Nampahafantariny ny mponina ao an-toerana mikasika ny:
Toe-javatra misedra (toy ny afo na fanafihana fahavalo);
Famaranana sy fanokafana vavahadin-tanàna 8 (4 kely sy 4 lehibe).
Isan'andro dia nizara in-33 ny famonoana tamin'ny 04:00 sy ny 28 ora tamin'ny 22:00 alina. Bosingang dia efitra lehibe roa-tiered izay natsangana tamin'ny fomba nentim-paharazana koreanina. Lehibe ny lakolosy, ary natsipy tamin'ny varahina izy ary teo ambanin'ny kardinaly manokana. Tamin'ny 1468, dia nijaly tamin'ny afo izy, saingy naverina avy hatrany izy. Ho an'ny tantara rehetra, ny rindrankajy dia navela hiverimberina noho ny afo na ny ady.
Amin'izao fotoana izao, ny lakolosy dia voatazona ao amin'ny Mozeam-pirenena ao Korea Atsimo ary miseho eo amin'ny tantara ara-tantara. Ao amin'ny toerana niaviany no misy ny lakolosy mitovy (mihoatra ny 3,5 m), ny feon'izy ireo dia azo henoina amin'ny taom-baovao. Vita tamin'ny varahina izy tamin'ny 1985 noho ny fanomezana avy amin'ny vahoaka.
Isan-taona amin'ny misasakalina ny 31 Desambra hatramin'ny 1 Janoary, olona marobe no manangona ao Bosingang. Amin'ny fomba nentim-paharazana, miandry tsipolitra kely 33 izy ireo, taorian'izay dia tonga ny Taom-baovao. Amin'izao fotoana izao dia miasa mafy ny fitateram - bahoaka eto an-tanàna sy ny masoivoho mpampihatra lalàna.
Naverina tamin'ny laoniny tanteraka ny trano lay tamin'ny taona 1979. Heverina ho tsangambato ara-javakanto sy harena nasionaly eo ambanin'ny 2. Ny fahafahana miditra amin'ireo fisarihana dia malalaka amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona.
Afaka miditra ny faritanin'i Bosingang ny rehetra, ary tsy misy fidirana fidirana. Eo akaikin'ny klaoba dia manampahefana manokana eo amin'ny andraikitra, izay mampiseho ireo mpitsidika ny fomba hikoriana marina ny mpikorisa hazo ary hitokona azy. Eto ny mpizahatany afaka miova amin'ny akanjon'ny Koreana nentim-paharazana ary ao anatin'io endriny io dia antsoina hoe lakolosy. Afaka manao sary manaitra ianao ary mahazo fihetseham-po maro. Ao amin'ny faritry ny toerana, matetika ny fety sy ny fankalazana ny firenena dia matetika.
Manomboka amin'ny afovoan-tanànan'i Seoul mankany amin'ny tilikambom-bavin'i Bosingang, azonao atao ny manatratra ny metro 1 metro . Ny fiantsonana dia antsoina hoe Station Sheongnyangni. Avy eto dia mila mandeha 5 minitra eo amin'ny Lalana Chonno ianao, izay trano fonenan'ny mpizaha tany maro.
Ny alika mampidi-doza indrindra
Ny Harry Styles dia hahazo $ 80 tapitrisa ho an'ny famoahana albumsa telo
Toby misy menaka
Stoleta nandritra ny fitondrana vohoka
Firy ny kaloria nandany ny toetry ny tony?
Neuroses amin'ny ankizy
Ahoana ny fomba fisoratana anarana zaza eo amin'ny toeran'ny ray?
Brad Pitt tamin'ny endrik'i Robert Redford dia nanamboatra ny fonon'ny gloss
Ahoana no hananana trondro?
Ny Neymar dia hiasa amin'ny sarimihetsika miaraka amin'i Wine Diesel
Ny hemolysis misy sela mena
Nosy Faroe Islands
Inona no dikan'ny Fambara Fanambarana?
Gipure fitafy ao amin'ny tany
Calcium Chloride - Fampiharana
Mariky ny fahendrena
FiNN FLARE ary fampindramam-bola tsy tapaka avy AmmoPay ho an'ny mpividy hendry!
Ny fandrianan'ny ankizy
Fashion manicure 2016 ho an'ny fantsika fohy
Inona no hakana zaza iray ao anatin'ny 4 taona?